Fiqi: Shir Farmaajo lagu difaacayo natiijo noocee baa laga sugayaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Fiqi: Shir Farmaajo lagu difaacayo natiijo noocee baa laga sugayaa?
Kulanka ayaa socda mudo Todobaad ku ku dhaw, welina wax natiijo ah lagama soo saarin, iyadoo madaxda ay isku mari la'yihiin qodobka amniga qaranka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaan Axmed Maclin Fiqi ayaa rajo xumo ka muujiyay Shirka maalintii 6aad ka socda magaaladda Muqdisho, ee u dhaxeeya Rooble iyo madaxda maamulada, kaasoo diiradda lagu saarayo arrimaha doorashadda iyo amniga dalka.
Wuxuu sheegay in Shirka ay fadhiyaan madax difaacaya Farmaajo xili ay soo baxayaan warar sheegaya in Lafta-gareen iyo Qoor-Qoor aysan raali ka ahayn in mas'uuliyadda amniga laga wareejiyo Madaxweynaha mudo-xileedkiisa dhamaadey.
Shir ay dhowr Farmaajo fadhiyaan, qaar ku dhex difaacayaan Mid. musharixiinta, kii asalka ahaana dagaal uu ka furtay madaxtoyada, natiijo noocee ah ayaa laga sugi karaa!? Farmaajooyin Farmaajo ka tashanaya!
Wasiirkii hore ee amniga Galmudug, ayaa kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ololaha ugu jira in Ciidamada taliskooda la hoos-geeyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseein Rooble, maadaama uu hogaamiyo hay'adda kaliya ee haysata sharciyadda go'aan ka gaarista masiirka dalka.
Arinta amniga qaranka ayaa ah dooda ugu adag ee miiska saaran, oo illaa hadda u xayiran in shirka war-murtiyeed laga soo saaro, oo lana soo afjaro, sida ay Keydmedia xogaha ku helayso.
Maalintii 6aad ayuu socdoo wadahadalka Afisyooni, iyadoo bulshadda Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka ay indhaha ku hayaan waxa kasoo bixi doono, iyadoo rajada ay aad u hooseyso.
Cali Yare ayaa ku magacaaban Gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir, waxaana loolan adag kala dhaxeeyaa Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur.